Ifulethi elinelanga elikufutshane neDolophu endala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlicja
Indlu enefenitshala yale mihla, esebenzayo kwindlu ehlala abantu iArt Nouveau ukusuka ngo-1904, ekumbindi weBydgoszcz, kufutshane nesikhululo sikaloliwe esikhulu kunye nonxweme loMlambo iBrda. Kufuphi: iibhari, iikhefi kunye nemarike enkulu yasekhaya. Ungahamba uye embindini wedolophu kunye neDolophu eNdala malunga nemizuzu eyi-15 kwipromenade kuMlambo iBrda okanye kwizitrato zombindi wesixeko, okanye unokuthatha itram ngokuthe ngqo.
Indlu yonke (40 m2) iyafumaneka kwiindwendwe - igumbi lokuhlala kunye nekhitshi, indawo yokulala eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela elinendlu yangasese. Ibekwe kumgangatho wokuqala. Kwigumbi lokuhlala kukho ifestile enkulu yebhayi enombono kumacala amathathu. Umgangatho wenziwe ngeparquet ye-oki yokuqala. Kukho indawo eninzi yokugcina iimpahla kunye nezinye izinto. Ubukho bemithombo eyahlukeneyo yokukhanya ikuvumela ukuba ulungelelanise ukukhanya ngokokhetho lwakho.
Igumbi lokulala elahlukileyo
Ibhedi ephindwe kabini enokohlulwa ibe ziibhedi ezimbini.
I-wifi ekhawulezayo – i-204 Mbps
Indawo yokuhlala ikwindawo ekufutshane neBydgoszcz Gł. Isikhululo sikaloliwe kunye neBrda river waterfront. Ikhulu leemitha ukusuka kwindawo yokumisa itram. Kukho iibhari, iikhefi, icawa kunye nemarike enkulu yendawo ekufutshane.
Elona ziko, iDolophu eNdala, indlu yeopera kunye neSiqithi saseMill esaziwa ngokuba yiBydgoszcz Venice-ziphakathi kwemizuzu eli-15 yokuhamba ecaleni kwendlela yokudlula kuMlambo iBrda okanye izitrato zombindi wesixeko.
Kwakhona kumgama ofanayo ungafumana iTheatre yasePoland kunye nePomeranian Philharmonic kunye neepaki ezinemithombo kunye neegalari zobugcisa (BWA, iMyuziyam yeL. Wyczółkowski).
Umbuki zindwendwe ngu- Alicja